Iqela lokudlala 2: Ungazisebenzisa njani iimpuku ezimbini kwikhompyuter enye | Iindaba zeGajethi
Iqela lokudlala 2: Ungazisebenzisa njani iimpuku ezimbini kwikhompyuter enye
Ngaba wakhe waphupha ngokudibanisa iimpuku ezimbini okanye ezintathu kwikhompyuter yeWindows? Ukuba ubukwenzile oko, ubuya kothuka xa enye impuku ingasebenzi enye, kuba zombini azinakuhlala kwindawo enye yokusebenza.
Ngoku ukuba kunjalo Kutheni iikhompyuter zescreen esisebenzisa imouse ye-USB? Ngamanye amagama, ukuba unekhompyuter yakho ene-Windows 8.1 kwaye kuyo unokulawula nganye iithayile ngomnwe wakho (ngenxa yokusebenza kwayo) kwaye unokwenza uhlobo olunye lwemisebenzi ngayo. ube yindlela ethile yokukwazi sebenza ngeempuku ezininzi kunye neekhibhodi kwikhompyuter enye. Oku kunokwenzeka ukuba sisebenzisa isixhobo esinomdla esibizwa ngokuba yi "TeamPlayer 2", ekhoyo zombini kuhlobo oluhlawulelweyo nolusimahla.
1 Kutheni uqhagamshela iimpuku ezimbini kwikhompyuter enye?
2 Inguqulelo ehlawulelweyo kunye nenguqulelo yasimahla ye «TeamPlayer 2»
Kutheni uqhagamshela iimpuku ezimbini kwikhompyuter enye?
Kwindawo yokuqala siza kuzama ukugqiba ngombono esiwukhankanyileyo kumhlathi odlulileyo kwaye, besikhankanyile ikhompyuter yakho enescreen sokuchukumisa apho imouse ye-USB ibinokudityaniswa khona. Ukuba uyawenza lo msebenzi ungasebenza kunye nemisebenzi nganye yale nkqubo yokusebenza nokuba zimbini iindlela, njengoko ungasebenzisa umnwe okanye imouse. Ngayiphi na imeko, isikhombisi semouse esinye siya kuhlala sikhona, nangona zimbini iindlela zokufaka. Isixhobo esinegama "Iqela lokudlala 2" linokwenza inkqubo kumazibuko e-USB Ikhompyuter yakho ineWindows, ukuze ifumane iimpuku ezininzi kunye neebhodi yezitshixo ezixhumeneyo. Oku kuthetha ukuba siyakuba nethuba lokubona izikhombisi zegundane ngokwenani lazo esidityaniswe namazibuko.
Izizathu zokwenza olu hlobo lomsebenzi ziyagwetywa ngabo banqwenela sebenza ngokubambisana kwiqela elinye; Kukho isidingo sokuba umzali afune ukufundisa abantwana bakhe abancinci indlela yokuphatha izicelo ezithile, ezinokuthi zingenamava kangako kuzo, ziqale ikukhokele inyathelo ngenyathelo ngendlela yokuvula okanye ukungasebenzi imisebenzi embalwa kokubini kwinkqubo yokusebenza nakwesiphi na isicelo somsebenzi.
Inguqulelo ehlawulelweyo kunye nenguqulelo yasimahla ye «TeamPlayer 2»
Sitshilo ngaphambili Kukho ingxelo ehlawulelweyo yesi sixhobo, ngokufanayo kwiwebhusayithi esemthethweni unokufumana ingxelo engu-3.0; Amaxabiso aphakanyiswe ngumvelisi welayisensi yesiqhelo kunye nokudibanisa izixhobo ezimbini (Oko kukuthi, kubasebenzisi ababini abohlukeneyo) inexabiso le- $ 490, kunye nohlobo oludityanisiweyo lwesi sixhobo sinye senani elifanayo labasebenzisi elinexabiso yeedola ezingama-950. Phantsi kwezi meko, akukho mntu unokuze alinge ukufumana olu hlobo lwelayisensi, kuba iindleko ziphezulu kakhulu.
Kuthekani ukuba singasebenzisa le nto Inguqulelo ye-beta ekhutshwe ngo-2008, eyamkela ubuninzi babasebenzisi abathathu (Oko kukuthi, iimpuku ezintathu kunye neekhibhodi ezintathu) zasimahla. Kwiwebhu awuzukukwazi ukufumana esi sixhobo kuhlobo lwaso lwe-beta (IQelaPlayer 2.0.10), nangona kwimeko yethu siyifumene ifihliwe kwiiseva ezahlukeneyo zewebhu kwaye besifuna ukwabelana ngeendaba ezimnandi ukuze uzisebenzise nangaliphi na ixesha. Kufuneka ucofe kwikhonkco lokugqibela ukuze ukwazi ukulikhuphela ngqo kwikhompyuter yakho.
Isixhobo siye savavanywa kwiinguqulelo ezahlukeneyo Windows 7 kwaye nakwiWindows 8.1, inenqanaba eliphezulu lokusebenza nokuba sele sibhekisa kuhlaziyo kwinqanaba le-beta. Sifuna ukuyigxininisa loo nto isixhobo esithi simahla kwaye simahla Ke ngoko, nangaliphi na ixesha iVinagre Asesino ingenisa naluphi na uhlobo lokungekho semthethweni okanye ubuqhetseba, kuba ayilungiswa kodwa isasazwe njengomphuhlisi ocetywayo ngelo xesha.
Ukhuphelo lweKhonkco: ukuseta-itafile yomdlali
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Iqela lokudlala 2: Ungazisebenzisa njani iimpuku ezimbini kwikhompyuter enye
Ndizamile nje kwaye ilula kakhulu kwaye iyasebenza. Ndiyabulela kakhulu!
Umhlobo olungileyo, ndiyifakile, kodwa ndiye ndaqonda ukuba xa ucinezela iimpuku ezimbini ngaxeshanye, okanye ushiya enye yazo icinezelwe, ayivumeli enye ukuba isebenze
ubrayan Steven sitsho
Andazi ukuba ndingayifumana njani kwakhona imouse ezimeleyo kwilaptop yam yeLenovo. Iyahamba kodwa ayiniki ukukhetha nantoni na endiyenzayo
Phendula u-brayan stiven
Ndiyayifuna le mac
Yile nto siyilindeleyo kuGoogle I / O 2015
Plop Boot Manager: Qalisa nge-USB Flash Drive kwikhompyuter ene-BIOS engahambelaniyo